Thura Ko Ko သည် ဇူလှိုင် 15, 2014 က 11:05amတွင် မှတ်ချက်ရေးသားသွားပါသည်။
lastleaf သည် အောက်တိုဘာ 28, 2012 က 1:44pmတွင် မှတ်ချက်ရေးသားသွားပါသည်။
ဒီလိုဆိုဒ်မျိုးရှိနေတာဒီနေ့မှ သိရပါတယ်။၀မ်းလည်းဝမ်းသာပါတယ်။ကျွန်တော် ဓါတ်(၁၈)ပါးကို မသိလို့ရှာရင်း ဒီဆိုဒ်ကိုတွေ့ရှိသွားတာပါ။စတင်တည်ထောင်သူနဲ့အဖွဲ့ဝင် မိတ်ဆွေအားလုံးကို လေးစားပါတယ်ခင်ဗျာ။လူသားတွေအားလုံး အမြတ်ဆုံးနိဗ္ဗာန်ကို အရောက်လှမ်းနိုင်ဖို့ ဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
ice cool သည် စက်တင်ဘာ 21, 2012 က 9:48pmတွင် မှတ်ချက်ရေးသားသွားပါသည်။
ဓမ္မာနုပဿနာ... သဗ္ဗေ သင်္ခါရ အနိစ္စာ..
သင်္ခါရ လို. သိ သင်္ခါရ လို. နှလုံးသွင်း သင်္ခါရ ထက် မပိုစေနဲ. (သို.)
ဖောက်ပြန်မှု လို. သိ ဖောက်ပြန်မှု လို. နှလုံးသွင်း ဖောက်ပြန်မှု ထက် မပိုစေနဲ.
ဖြစ်ဖြစ်သမျှ သင်္ခါရ ဒုက္ခသစ္စာ မှတ်..
သင်္ခါရတွင် ငါကောင်ထင် ခင်မင် သမုဒယ မှတ်..
တစ်ခုခုဖြစ် လာတာမဟုတ် ပဲ ဖောက်ပြန်မှု(ဒုက္ခသစ္စာ) တွေပဲ ဖြစ်နေတာ လို. နားလည်ထားရပါမယ်..
တစ်ခုခုပျက် သွားတာမဟုတ် ပဲ ဖောက်ပြန်မှု(ဒုက္ခသစ္စာ) တွေပဲ ပျက်နေတာ လို. နားလည်ထားရပါမယ်..
သင်္ခါရ ဖြစ် သင်္ခါရ ပျက် ခြင်း သဘော မျှသာ..
သင်္ခါရ(ပရမတ် စစ်) ဆိုတာ နာမည်တပ် မရတဲ. ဖြစ်ကာမျှ လေးပဲ..
အဲ.ဒါကို သိတဲ. အသိကလဲ သင်္ခါရ သိကာမျှလေး ပဲ..
တရားဆိုတာ သဘော တရားသိတယ်ဆိုတာ သူ.သဘောသိ သွားခြင်းသာ..
အညွန်းး ပခုက္ကူ ဆရာတော်ကြီး
သစ္စာဒီပက ဆရာကြီး ဦးကြည်
ကလေးတို.ဆရာမ သည် ဇူလှိုင် 16, 2012 က 4:36pmတွင် မှတ်ချက်ရေးသားသွားပါသည်။
သာဓု -စာဓု -သာဓုပါ
thet naing သည် ဇူလှိုင် 16, 2012 က 4:14pmတွင် မှတ်ချက်ရေးသားသွားပါသည်။
လောကမှာ လူရယ်လို့ ဖြစ်လာရင် စားဝတ်နေရေး ကျန်းမာရေး စီးပွါးရေး လူမှုရေး အစရှိသဖြင့် မိုးလင်း
ကမိုးချုပ် လှုပ်ရှား ရုန်းကန်နေကြရတာဟာ လူ့ သဘာဝ လို့ တောင် ပြောရမလိုဖြစ်နေတယ်၊
ဘ၀တစ်ခု ရှင်သန်ကြီးပွါးတုိုးတက်ဖို့ ဆိုပြီး အပြိုင်အဆိုင်လုပ်နေကြရတာဟာ ကိုယ့်အတွက်တော့
ဟုတ်လှပြီလို့ ထင်နေကြတယ်၊ လူမှန်ရင် ကြီးပွားတိုးတက်ချင်တဲ့သူမှန်ရင် ဒီလိုပဲလုပ်ရမယ်လို့အများ
ကထင်နေတြတယ်၊လက္ခံထားကြတယ်၊အဲဒီလို ပင်ပင်ပန်းပန်းရှာဖွေပြီး ရလာတဲ့ပိုက်ဆံလေးနဲ့ကိုယ်
လုပ်ချင်တာ လုပ်လို့ ရတယ်ဆိုပြီး ပျော်ပျော်ပါးပါးနဲ့ ဇိမ်ခံနေတတ်ကြတယ်၊ဒါကိုပဲ လောကချမ်းသာလို့ 
သူတို့ က ထင်နေကြတယ်၊ဟုတ်ပါတယ် လောကချမ်းသာပါ၊ဒါပေမယ့် ဒီချမ်းသာတွေဟာ တကယ့်
အရေးအကြောင်း၊ ဒုက္ခတွေနဲ့ လည်းတွေ့ ပါရော ကိုယ့်ကို စိတ်ချမ်းသာအောင်၊ စိတ်ဆင်းရဲမှုမှ လွတ်
မြောက်အောင် ကယ်တင်နိုင်ပါရဲ့ လားလို့ ပြန်စမ်းစစ်ကြည့်ပါ၊မကယ်တင်နိုင်တာကို တွေ့ ရပါလိမ့် မယ်၊
ဒါဆိုရင် တစ်ချို့ က အားကိုးစရာဆိုတာ လောကမှာ မရှိနိုင်တော့ဘူးလားလို့မေးစရာဖြစ်လာလိမ့်မယ်၊
ဟုတ်ပါတယ် လောကမှာ အားကိုးစရာအစစ်ဆိုတာ ရှိပါသေးတယ်၊ အဲဒါကတော့ ဘုရားပွင့်မှသာ
ဘုရားဟောမှသာ လောကလူသားတွေသိနိုင်တဲ့ ၀ိပဿနာတရားပါပဲ၊ မဂ္ဂင်(၈)ပါးတရားပါပဲ။
၀ိပဿနာတရားဆိုတာ ငါ သူတစ်ပါး ယောင်္ကျား မိန်းမ ဆိုတာမရှိ အကျဉ်းပြောရရင် ရုပ်တရား၊
နာမ်တရား၊အကျယ်ပြောရမယ်ဆိုရင် ခန္ဓာ ၅-ပါး၊ အာယတန ၁၂-ပါး၊ ဓါတ် ၁၈-ပါး စသည်ဖြင့်
ပရမတ်တရားတွေသာရှိတယ်၊ပရမတ်တရားတွေဟာလည်း မတည်မြဲ အမြဲတမ်းဖောက်ပြန်ပျက်စီး
နေတဲ့သဘောရှိတယ်၊ အဲဒီ မမြဲတဲ့သဘောာ ဆင်းရဲတဲ့သဘော ကိုယ်စိုးကိုယ်ပိုင်တဲ့သဘောမရှိ
အနှစ်မရှိတဲ့သဘောကို မြင်အောင်ရှုရတာဖြစ်တယ်၊မမြဲတဲ့ အရာကို ချမ်းသာလို့ ခေါ်နိုင်မလား၊
ဖောက်ြပန်ပြီးဆင်းရဲနေတဲ့သဘောကို ချမ်းသာလို့ ခေါ်နိုင်မလား၊ မမြဲတာကိုမြဲအောင် ဆင်းရဲတာကို
ချမ်းသာအောင် ကိုယ်လုပ်ချင်တိုင်း လုပ်မရတဲ့ အနတ္တသဘောကိုချမ်းသာလို့ ခေါ်မလား၊၀ိပဿနာ
ဥာဏ်ရင့်သန်လာတဲ့အခါမှာ အဲဒီလိုမြင်လာတယ်၊လောကမှာ ပစ္စည်းဥစ္စာကြီးပွားဖို့ ထက် ၀ိပဿနာ
တရားကြီးပွါး တိုးတက်ဖို့ ကပိုပြီးတော့ အရေးကြီးလာတယ် တရားကို ပိုပြီးတော့ အားထုတ်လာတယ်၊
လောကကြီးပွါးမှာကတစ်ခဏ တစ်ဘ၀၊ အရှာအဖွေ မရိုးသားရင် သံသရာမှာ ဘ၀ပေါင်းများစွာခံရမှာ၊
၀ိပဿနာစိတ်ကလေးရှိလို့ရောင့်ရာင့်ရဲ ရဲနေနိုင်ရင် ဒီဘ၀မှာလည်း စားဝတ်နေရေးအတွက် ရိုးရိုးသား
သားရှာဖွေလို့သမ္မာအာဇီဝဖြစ်ကာ နောက်ဘ၀ အပါယ်လေးပါးမှလွတ်မြောက်ပြီး နောက်ဆုံးဘ၀မှာ
နိဗ္ဗာန်ကို မျက်မှောက်ပြုနိုင်မယ်၊ ဒါ့ကြောင့် နေ့ စဉ်ဘ၀ထဲမှာ ၀ိပဿနာ အလုပ်လေးကိုပါတွဲပေးသင့်
ပါတယ်။ အားလုံး ကောင်းကျိုးလိုရာဆန္ဒ ပြည့်ဝကြပါစေလို့ ...။
wai mon သည် မေ 7, 2012 က 2:59pmတွင် မှတ်ချက်ရေးသားသွားပါသည်။
ခရီးမထောက် လမ်းဖြောင့်ကို ရှာနိုင်ပြီး
လုပ်ငန်းစဉ်အတိုင်း ကြိုးစားအားထုတ်၍ မဂ်ဖိုလ် နိဗ္ဗာန်ကို အလျှင်အမြန် မျက်မှောက်ပြုနိုင်ကြပါစေ...
Thukha Nadi သည် ဖေဖော်ဝါရီ 16, 2012 က 6:25amတွင် မှတ်ချက်ရေးသားသွားပါသည်။
မိမိ၏ ရုပ်နာမ်ခန္ဓာက ဖြစ်ပျက် ကို မမြင်သေးရင် မိမိ သန္တာန်မှာ ဘုရား မပွင့်သေးဘူး ဆိုတာကို ကောင်းကောင်းကြီး သတိပြုပါ။ ဒါကြောင့် ဝိပသာနာ အလုပ်ကို တကြိမ်ကနေစပြီး ကြိမ်ဖန်များစွာ အားထုတ်နိုင်အော် ကြိုးစားကြပါ လို့တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်
မျိုးသန့် ကျော် သည် ဖေဖော်ဝါရီ 2, 2012 က 12:39amတွင် မှတ်ချက်ရေးသားသွားပါသည်။
အနှစ်မပါ ဤ ခန္ဓာ
Moe သည် ဇန်န၀ါရီ 18, 2012 က 4:12pmတွင် မှတ်ချက်ရေးသားသွားပါသည်။
zatila2010 သည် ဇန်န၀ါရီ 14, 2012 က 7:03pmတွင် မှတ်ချက်ရေးသားသွားပါသည်။
၁။ ငရဲ ရောက်စဉ် ရှုမှတ်ချင် အသင် မရပါ။
၂။ တိရိစ္ဆာန် ဖြစ်စဉ် ရှုမှတ်ချင် အသင် မရပါ။
၃။ ပြိတ္တာ ဖြစ်စဉ် ရှုမှတ်ချင် အသင် မရပါ။
၄။ အသုရကာယ် ဖြစ်စဉ် ရှုမှတ်ချင် အသင် မရပါ။
၅။ သင့်ဘ၀တွင် ရှုမှတ်ချင် ခုပင် ရနေပါ။
၆။ ရှုမှတ်ခွင့်ရ သင့်ဘ၀ အရ တော်လှပါ။
၇။ မဂ်ဖိုလ်ဆိုတာ ပျင်းသူဟာ ဘယ်ခါ မရပါ။
၈။ နိဗ္ဗာန်ဆိုတာ ပျင်းသူဟာ ဘယ်ခါ မရပါ။
၉။ ကြိုးကြိုးစားစား ရှုမှတ်ပွား သူကား ရနိုင်ပါ။
၁၀။ မဂ်ဖိုလ်ရချင် ယခုပင် အသင် ကြိုးစားပါ။
၁၁။ နိဗ္ဗာန်ရချင် ယခုပင် အသင် ကြိုးစားပါ။
၁၂။ ကြိုးစားမှတ်က မဂ်ဖိုလ်က မုချ သင့်ထံ ဆိုက်ရောက်မှာ။
၁၃။ ကြိုးစားမှတ်က နိဗ္ဗာန်က မုချ သင့်ထံ ဆိုက်ရောက်မှာ။
၁၄။ မဂ်ဖိုလ်ရမှ အပါယ်က လုံးဝ လွတ်မြောက်ပါ။
၁၅။ နိဗ္ဗာန်ရမှ အပါယ်က လုံးဝ လွတ်မြောက်ပါ။